Tajikistan: Tantara Momba Ny Dia Mahavariana · Global Voices teny Malagasy
Tajikistan: Tantara Momba Ny Dia Mahavariana
Voadika ny 19 Jona 2017 4:49 GMT
Misy tantara mahaliana momba ilay vehivavy Amerikàna nitety an'i Tajikistan ary nanoratra mombamomba ny dia. Toa tsy tena faly tamin'ny tolotra tao amin'ity firenena ity izy fa kosa tia miresaka amin'ny olona ary mahafantatra momba ny fiainan'izy ireo sy ny fomba amam-panaon'izy ireo. Tao anatin'ny roa andro, manana zavatra marobe hotantaraina izy …
Mpizaha tany iray hafa, drysdales nitsidika an'i Hissar. Nankany amin'ny tranombakoka izy ary nahita akanjo, kiraro fahiny, akanjontany, ary koa rojo sy sabatry ny mpiady. Nisy tokotany vita rarivato miaraka amin'ny efitra kely fitifirana marobe tao . Amin'ny endrika maroloko sy mahaliana ny sasany tamin'ireo asa peta-kofehy. Ny varavarana mankao amin'ny tranombakoka dia vita hazo sy nasiana soratra antsipirihany.
Nitsidika an'i Khorog i Dan sy Audrey ary nilaza taminay momba ny sidin'izy ireo avy any Khorog ho any Dushanbe. Tamin'ny lahatsoratr'izy ireo, nahitana sary mahafinaritra sy lahatsary mampiseho ny fialàna tamin'ny fiarakaretsaka sy ny fiaingan'ny fiaramanidina ny ampitso ny 30 segondra voalohany ary ny 90 segondra manaraka dia ao anatin'ny habakabaka.
Tamin'ny tapa-bolana lasa ihany koa, nisy ny fakàna sary mahafinaritra nataon'ny olona nitsidika ny firenena: TrekEarth (fidirana ao Saghirdasht) sy babasteve izay tsy mba reraky ny maka sary.